Kumhanyisa peji uye Vashanyi Vako | Martech Zone
Chimwe chezvinhu chakanyanya kuomarara kana kudhura kukonzeresa ndiko kumhanya kuri kutakurwa newebsite yako. Iyi ihondo inogara iripo pano paMartech… kusangana kwemagariro uye kushambadzira kunononoka peji kutakura nguva nzira, zasi saka saka isu tinogara tichiedza kuzvigadzira kuburikidza nenzira dzinoverengeka. Isu tinoziva kuti tinorasikirwa nevamwe vashanyi pamusoro payo - kunyanya kana paine yakawanda traffic.
Mamwe makambani haatore nguva yekuremerwa zvakanyanya, asi zvine hunyanzvi pane yako saiti kugona kuita uye kushandura vatengi. Nyaya iripo, Kissmetrics isa pamwechete iyi infographic iyo inoratidza kurasikirwa.
Kana iyo e-commerce saiti iri kugadzira $ 100,000 pazuva, a 1 peji rechipiri kunonoka kunogona kukudyira $ 2.5 mamirioni mukutengesa kwakarasika gore rega.
Tags: ERPkutungamirirakureba kwetamboriparariresocial media gwaraterevhizheni